Momba anay - Wisdom Metal Composites Co., Ltd.
Alucosun, marika vaovao ho an'ny tsenan'ny Aluminium Composite Panel! Ny ekipanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny Indostrian'ny Panel Composite Aluminium, manomboka amin'ny Production to Product Development. Vonona ny ho mpanamboatra manerantany amin'ny alàlan'ny haitao farany sy ny fikarakaran'ny mpanjifa ambony izahay.
Hatramin'ny nanombohany, Alucosun dia nibanjina ny masony foana nandritra ny dia manontolo, nanomboka tamin'ny fananganana ny akora hatrany amin'ny vokatra farany. Ny lafiny rehetra manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fanamboarana dia tanteraky ny rafitra fanaraha-maso kalitao - mifangaro tanteraka amin'ny inspecteur matihanina sy ny fitaovana laboratoara mandroso, manome toky fa ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena: Eoropeana Alemanina DIN, Commonwealth UK BS, American ASTM, Moyen Orient ary sns.
Ny ekipa Alucosun dia manolo-tena hanohana ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanomezana ny fandefasana ara-potoana ny vokatra sy serivisy azo itokisana avo lenta. Ireo antony rehetra ireo dia afaka manampy amin'ny fahazoana tombony amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenanao. Izahay dia mikendry ny hitazona ny vina sy ny iraka aminay amin'ny fikatsahana hatrany ny fanatsarana sy ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy fianarana tsy tapaka. Izahay dia mikendry ny hampivoatra teknolojia vaovao sy fomba fanao tsara indrindra. Ho an'ny faharetana feno, ny mpiasanay dia reharehanay ary mikendry ny hanome tontolo mahafinaritra sy fikolokoloana ary fitomboana izahay izay mandrisika ny mpiasantsika hamokatra be ary hitombo ny tenany sy ny matihanina.
mizara ny finoana iraisana isika fa tsy ny fahaizana ihany, fa ny fihetsika koa dia afaka mamaritra ny hoavintsika.
Tongava hiara-hiasa aminay ary ataovy mpiara-miasa azo antoka izahay!
Alucosun dia manana fantsona roa sy tsipika famokarana lamination dimy (tsipika 2000mm-sakany lehibe tafiditra ao). 20 taona mahery i Alucosun no nanaparitaka elany nanerana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo vokatra marin-toetra sy tsara kalitao ho an'ny mpanjifany.
1) antsipirian'ny fitaovana:
Masinina miolakolaka sy manodina 3 set
Tsipika fanadiovana simika 2 set
Tsipika fandrakofana haingam-pandeha 2 set
Tsipika fananganana 5 set
2) Fahaiza-mamokatra / Taona:
Panels amin'ny kompana Aluminium 7,6 tapitrisa / sqm
Panels Latte Aluminium 1 tapitrisa / sqm
Coil mifono aluminium 18500 taonina